Mifaly I Costa Rica Satria Sambany Tafakatra Ampahaefa-dalana Amin’ny Mondialy Ny Ekipam-pireneny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jolay 2014 15:35 GMT
Nifaly tao amoron-dranomasina Tamarindo ireo Kosta Rikàna taorian'ny fandresen'ny ekipam-pireneny an'i Gresy nandritra ny Mondialy FIFA 2014 tao Brezil. Sary avy amin'i Thornton Cohen. Zon'ny mpamorona Demotix (June 29, 2014).
Sambany tafakatra ampahaefa-dalana ny ekipam-pirenen'i Kosta Rikà amin'ny Mondialy FIFA 2014 ao Brezila rehefa nanamontsana ny ekipa Gresy tamin'ny isa 5-3 tamin'ny fanalavam-potoana nandritra ny tifitra penalty taorian'ny lalao ady sahala 1-1.
Teo amin'ny minitra faha-52 tamin'ny lalao Alahady teo, nanamarika isa iray i Kosta Rikà tamin'ny baolina nampidirin'i Bryan Ruiz rehefa nodakan'i Joel Campbell sy Christian Bolaños teny aminy ny baolina . Nivadika nahafinaritra avokoa ny rehetra hoan'ny “ticos”, araka ny anarana mahazatra ahafantarana an'i Kosta Rika, na dia teo aza ny fahadisoan'i Óscar Duarte tamin'i Lazaros Christodoulopoulos teo afovoan'ny kianja izay nahazoany karatra mavo fanindroany, ary nahavoaraoka azy teo ambonin'ny kianja.
Nampiditra baolina hoan'i Gresy kosa i Sokratis Papastathopoulos teo amin'ny minitra faha-91 izay nahatonga ny lalao ho ady sahala, ka voatery nilalao tamin'ny fanalavam-potoana 30 minitra fanampiny ny ekipa roa tonta. Olo-maherin'ny tifitifitra ny mpiandry tsatobin'i Kosta Rika, Keylor Navas, nahazo ny baolina nodakan'i Fanis Gekas ary nahatonga ny ekipany tafiditra tamin'ny dingana manaraka.
Nipoaka manerana an'i Kosta Rikà ny fankalazana, araka ny fanamarihana [es] avy amin'ny habaka El blog de mi fútbol ecuatoriano (Ny bilaogin'ny baolina kitrako Ekoateriana):
Tao amin'ny kianja foiben'ny demaokrasia, izay nanjary toerana hoan'ny Mondialy “fanfest”, mitovy avokoa ny fanehoan-kafaliana, ahitana ireo olona mitsambikimbikina am-pifaliana, dihy sy oroka tampotampoka amin'ny vahiny sendra nandalo.
Na dia eo aza ny fifaliana, nolavin'ny filoha ny tolo-kevitra hanaovana ny andro Alatsinainy ho andro tsy fiasana hoan'ireo mpiasam-panjakana.
Filohan'i Kosta Rikà, Luis Guillermo nisioka hoe:
Tantara ity! #CRC Mankalaza ho anareo ry zalahy ny firenena manontolo. Ekipam-pirenena mahatalanjona!
Niditra Twitter ireo mpankafy Kosta Rika mba hanamarika ity zava-bita manatantara nataon'ny ekipam-pireneny ity, natomboka tamin'ilay mpiandry harato Keylor Navas:
Hoan'Andriamanitra, ny fianakaviako, ny ekipa miaraka amiko, hoan'i Kosta Rikà manontolo iny baolina azon'ny mpiandry tsatoby iny. Ho ela velona ny ekipam-pirenena sy i Kosta Rikà!
@someecardES nanome fampitandremana hoan'i Holandy:
Holandy: lasibatr'i Kosta Rika manaraka.
Ny sasany kosa nisioka ireo sary nandritra ny fankalazana:
Kosta Rikà omaly, (Alahady 29 Jiona) sary avy amin'i @alvaradofoto.
Niaina hadalana tsy nisy toy izany i #CR taorian'ny fahombiazana manatantara amin'ny ampahaefa-dalana (LAHATSARY).
Ny sasany kosa niarahaba ny ekipa ary matoky azy ireo amin'ny lalao manaraka:
Sary MAHATALANJONA an'ireo ekipa niakatra nandresy. Nametraka tantara i KOSTA RIKA.
Tsy matahotra an'i Holandy i Kosta Rikà. RECIFE, Brezila – Tsy nampoizina tanteraka tamin'ny Mondialy i Kosta Rikà hatramin'izao ary ireo mpilalao dia mitady….
Tompon-daka Manerantany Manadala! Mampiseho ohatra i Kosta Rika fa mety hitranga avokoa ny zava-drehetra.
Mpisera iray, @Aritz_FCB, nizara ny fanantenany:
Farany, mety ho marina fa ho lasa tompon-daka maneran-tany i Kosta Rikà…